Fahasalamàna · Avrily, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamàna · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Fahasalamàna tamin'ny Avrily, 2011
Ny olana tahaka ny VIH/SIDA sy ny olona mitovy nefa mifanambady dia olan'ny fihetseham-po any Zambia. Iry voalohany dia naka aina maro tato anatin'ny dimiambiroapolo taona farany ary itsy farany dia olana tsy sahin'ny olona resahana imasom-bahoaka akory. Ny sasany tamin'ireo Zambiana tao amin'ny Twitter, na izany aza, dia nanasongadina endrika iray mahaliana amin'ilay adihevitra mikasika ny fifanambadian'ny olona mitovy - hoe tokony haparitaka any amin'ireo fonja Zambiana ny fimailo, toerana izay fantatra fa isian'ny fampiharana ny sodomia (firaisana amin'ny lava-body).
Chile: Toeram-Pandiovana (Refinery) Misokatra Indray Na Teo Aza Ny Fahampoizinana Tany An-Tsekoly
Amerika Latina 08 Avrily 2011
Nanapa-kevitra nanakatona sekoly iray ny Ministeran'ny Fahasalamana tany Chile tamin'ny 23 Martsa 2011, taorian'ny fanamarinana fisianà tranga 40 [es] olontsotra sy mpianatra voapoizin'ny solifara, varahina sy akora hafa miaty solifara. Fitsarana iray no nandidy ny hanakatonana ilay orinasa, navela iìhisokatra indray izy io 24 ora latsaka taty aoriana rehefa nanao fampakarana ny didy navoaka ny Codelco, ilay orinasa tompon'ilay fandiovana. Nahazo alalana hiverina an-tsekoly ny mpianatra tamin'ny 4 Aprily teo.